Dhulgariirka Pakistan oo dad badni ku dhinteen - BBC Somali
Dhulgariirka Pakistan oo dad badni ku dhinteen
25 Sebtembar 2013
Image caption Saamaynta dhulgariirka Pakistan
In ka badan saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay ilaa hadda dhulgariir ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan, waxana ku dhaawacmay dad aad u fara badan oo kale.
Tirooyinka ugu danbeeyey waxay marayaan dhimashada oo ah ilaa 330 qof, dhaawacuna kumanaan. dhulgariirkani waxa uu ka dhacay degmada la yidhaa Balochistan oo ku taal dhinaca gobollada Koonfur Galbeed ee dalkaasi.
Dadkii ka sabatabaxay dhulgariirkaasi ayaa lagu soo warramayaa inay u baahan yihiin gurmad iyo taakulayn degdeg ah, sida biyo, cunno, daawooyin, iyo teendhooyin lala gaadho. Dhakhtar ka mid ah dadka ku hawllan gurmadkaasi oo la hadlay BBC-duna waxa uu sheegay inay la tacaalayaan hawlo aad u fara badan oo iyaga ka xoog weyn
Waxa kale oo dhibaato ka imanaysa degaannada dhulgariirku ka dhacay oo ah kuwa aad u fog sidii loo gaadhi lahaa, taasi oo dhibaato ku haysa gaadhsiinta taakulayntii iyo adeegyadii loo baahna si dhakhso ah.
Waxa la sheegay in dhulgariirkaasi uu aasay tuulooyin iyo magaalooyin door ah oo ay ku rogmatay ciid, dhagaxaan iyo dhooqooyin, kuwaasi oo dhulka la simay wax kasta, meelaha qaarna go'doomiyey.